Inona no karazana plastika azo welded amin'ny alalan'ny milina welding ultrasonic plastika?
Maro ny olona mihevitra fa raha mbola tahaka ny plastika vokatra, dia azo ampiasaina sy namboatra koa iray ultrasonic plastika welding milina. Raha ny marina, izany dia diso, satria ny hery niteraka ny ultrasonic plastika welding milina indray mipy Tena lehibe. Raha ny vokatra welded tsy mahatanty ny angovo, dia hiteraka fahavoazana lehibe ny vokatra.
Ny ultrasonic iombonana welding no tena ampiasaina amin'ny plastika toy ny ABA plastika, ABS plastika, AES plastika, AMMA plastika, Arp plastika, AS plastika, Sal plastika, PP plastika, PC plastika, PE, PVC sy ny sisa. Ny fitsipiky ny ultrasonic plastika welding milina dia ny mampita avo-hovitrovitra onja matetika ny faritra roa zavatra ho welded ary hampiadana indray ny faritra ny zavatra roa samy hamafàny manohitra ambany fanerena mba hanangana ny Fusion eo ny molekiolan'ny sosona. Amin'ny teoria, na plastika fitaovana azo welded, satria samy fitaovana manana ny voajanahary matetika, ny mafana fahamarinan-toerana ny plastika vokatra toy ny PVC resin dia tsy dia tsara tokoa, ary mora ny simba (matetika mavo ary potipotika misy poizina mandatsa-dranomaso) noho ny kely ambony mari-pana, izay niafara tamin'ny mahantra interface tsara sy ny famehezana, ary ny poizina mandatsa-dranomaso no manimba ny olona sy ny tontolo iainana.
Noho izany, ny ultrasonic plastika welding milina rehetra izao dia tsy ho ny welding ny plastika. Rehefa eo na plastika ny ultrasonic welding milina azo ampiasaina, raha isika no tokony hihevitra ny fitaovana plastika vokatra manaraka ny fampiharana sehatra ny ultrasonic plastika welding milina. Raha miomana tsara mialoha isika, dia hahazo avo roa heny ny vokatry tamin'ny antsasaky ny ezaka.